सुशान्त र श्रद्धाको ‘छिछोरे’ले पनि १५० करोड भन्दा कमायो ! - Birgunj Sanjalसुशान्त र श्रद्धाको ‘छिछोरे’ले पनि १५० करोड भन्दा कमायो ! - Birgunj Sanjalसुशान्त र श्रद्धाको ‘छिछोरे’ले पनि १५० करोड भन्दा कमायो ! - Birgunj Sanjal
सुशान्त र श्रद्धाको ‘छिछोरे’ले पनि १५० करोड भन्दा कमायो !
२० आश्विन २०७६, सोमबार १८:४०
काठमाडौं । नितेश तिवारीको निर्देशनमा बनेको मल्टीस्टारर् फिल्म ‘छिछोरे’ रिलिजमा आएको एक महिना पुगिसकेको छ । ६ सेप्टेम्बरबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आएको यो फिल्म ६ अक्टोवरबाट एक महिना पूरा भइसकेको हो । यो फिल्म अझैं पनि केही स्क्रिन्समा प्रर्दशनरत छ । करीब ५० करोडको बजेटमा निर्माण गरिएको ‘छिछोरे’ले अहिलेसम्म १५० करोडभन्दा बढीको ब्यापार गरिसकेको छ ।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शका अनुसार ‘छिछोरे’ले रिलिजमा आएको पाँचौं दिन ५० करोडको ब्यापार गरिसकेको थियो । त्यस्तै ९ औं दिन बक्स अफिसमा ७५ करोडको आँकडा छुइसकेको थियो । फिल्मले रिलिजमा आएको १२ औं दिन १०० करोडको ब्यापार गरेको थियो । साथै रिलिजमा आएको १७ औं दिनमा १२५ करोड र ३१ औं दिन १५० भन्दा बढीको ब्यापार गरिसकेको छ ।
फिल्मको स्टारकास्टको कुरा गर्नुपर्दा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत र अभिनेत्री श्रद्धाक कपुर मुख्य भूमिकामा छन् । उनीहरुका साथमा बरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, नवीन पोलिशेट्टी, तुषार पाण्डे, र सहर्ष शुक्ला पनि मुख्य भूमिकामा छन् ।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शका अनुसार टोटल धमाल र मिशन मंगलपछि यो फक्स स्टार स्टुडियोको तेस्रो फिल्म हो, जसले बक्स अफिसमा १५० करोड भन्दा बढीको ब्यापार गरेको छ ।